Navoaka tao afovoan'ny rahona an'ny COVID-19-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
Navoaka tao afovoan'ny rahona COVID-19 ireo mpamaky biriky mpamono-tena
On 15th Jona 2020, niaraka tamin'ny kamionan'ny kaontenera farany niala tao amin'ny trano fitehirizany, ny Square Technology dia nahavita nanolotra roa voalohany tamin'ireo vata fampangatsiahana 4 niangona ho any Dachan Food (Taiwan). Ny vata fampangatsiahana roa sisa tavela dia kasaina halefa ao anatin'ny roa herinandro. Ireo mpamirifiry boribory mihosin-tena dia aterina amin'ny fandaharam-potoana nefa tsy misy ny fiantraikan'ny COVID-19, noho ny ezaky ny mpiasa sy ny injeniera Square Technology.
Ny vata fampangatsiahan-tsolika avy amin'ny Square Technology dia tsy vitan'ny mpanjifa sinoa ihany, fa malaza eo amin'ireo mpanjifa any ivelany. 2018-2019, napetraka tao anaty vatan-kazo miendrika boribory maro be ary napetraka tamina toeram-pamokarana telo samy hafa an'ny CP Foods Group any Thailand, izay mpandrindra akoho amam-borona betsaka indrindra any Azia. Ny sakafo CP dia tena afa-po amin'ny kalitaon'ny fitaovana ao anatin'izany ny fahadiovana, ny fahamendrehana, ny fikojakojana mora foana, ny fiasan'ny HMI namana ary ny fanampiana ara-teknika ara-potoana.
Hatramin'izao, ny Square Technology dia nanatitra maherin'ny 40 mpametaka boriborintany, izay ampiharina amin'ny indostria isan-karazany, indrindra amin'ny akoho amam-borona, hena, sakafo vonona, sns.
Misimisy kokoa momba ny vondrona Dachan:
Rehefa nanangana an'i Tai-Dong Mills i Ho-jan Han, mpanodina menaka soja ary mofomamy kely, tamin'ny 1957, dia nametraka fahitana izay manohy mitondra ny mpandimby maodin'i Tai-Dong - ny DaChan Great Wall Group.
Nandritra ny antsasaky ny zato taona mahery, ny DaChan Great Wall Group dia nanohy ny fahitana ny asan'ny mpisava lalana tamim-pahamarinana sy fanetren-tena. Ny vondrona dia miasa rafitra miharo volo amin'ny akoho amam-borona ,sosona,mibodo,sy ny fiompiana anaty rano izay mifehy tanteraka ny fiompiana, fampielezana, famokarana sakafo, famonoana ary fanodinana farany. Ny vondrona dia mampitombo ny sehatry ny orinasan-tsolika sy lafarinina ary mivelatra hatrany amin'ny sehatry ny F & B ary amin'ny fitantanana ny tany. Androany, ny DaChan Great Wall Group dia miasa vondrona orinasa enina, ao anatin'izany ny vondrona Business Feed & Flour, Agri-Meat & Egg Business Group, Groupe Business Business Processed, Foodservice Business Group, South Asia Business Group, ary East Asia Business Group.
Mifanaraka amin'ireo tanjona kendrena ho an'ny isam-paritra, i DaChan dia miasa mihoatra ny zato ny zanatany manerana ny tsena lehibe ao Taiwan, Sina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Myanmar ary Kambodza.